ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တစ္ဆေ”
(အဖျားတက် ငြီးတွားနေခြင်း မဟုတ်။ အံကြိတ်ကာ ပြုံးနေခြင်း ဖြစ်သည်။)
ဒါဆိုလည်း ထိလွယ်ရှလွယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု လာလေရော့။ တွေ့ကြသေးတာပေါ့။ ငှဲငှဲ..
ဟောက်သံများကြောင့် တရေးနိုးလာသော မဒမ်ပေါသည် ကိုပေါကို “ဟိုဘက်လှည့်ပြီး ဟောက်စမ်းပါ နားညီးလိုက်တာ” ဟု ပြောလိုက်လေသည်။ ကိုပေါက တုတ်တုတ်ပင်မလှုပ်။ နောက်တစ်ခွန်း ထပ်ပြောပြန်သည်။ ကိုပေါက မပြောင်းလဲ။ မဒမ်ပေါက စိတ်မရှည်တော။့ ကိုပေါ၏ ပခုံးကို ကိုင်လှုပ်ရင်း “ကဲ ပြောနေတာကို” ဟု ခပ်ဆတ်ဆတ် ပြောလိုက်ပြန်သည်။ ကိုပေါကား အိပ်မောကျနေဆဲ။ မဒမ်ပေါက ငုတ်တုတ်ထထိုင်က ညအိပ်မီး ပြာလဲ့လဲ့အောက်မှ ကိုပေါ၏ မျက်နှာကို စိမ်းစိမ်း ကြည့်လိုက်သည်။ ကိုပေါကား မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ကာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျနေပုံ ပေါ်သော်လည်း… ထူးဆန်းလေစွ။ ခံစားမှုမျိုးစုံဖြင့် မျက်မှောင်ကျုံ့လိုက် မဲ့သွားလိုက် စပ်ဖြဲဖြဲဖြစ်လိုက် နှင့် နောက်ဆုံးတွင် အလွန် သဘောခွေ့နေဟန် ပြုံးဖြီးဖြီးကြီး ဖြစ်သွားလေသည်။ ဟင်.. ငါကတော့ သူ့ဟောက်သံကြောင့် လန့်တောင်နိုးရတယ် သူကတော့ အိပ်မက်ထဲမှာ ဘာတွေနဲ့ ကြည်နူးနေပါလိမ့်.။ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း တလိမ့်လိမ့် ဒေါသ ထွက်လာသော မဒမ်ပေါသည် နောက်ဆုံးတွင် အနီးရှိ မှန်တင်ခုံမှ သနပ်ခါးတုံးကို ကောက်ကိုင်ကာ ကိုပေါ၏ အလွန်ကောင်းလှသော ဆံပင်များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့် ခေါင်းကို….. ဒန်တန့်ဒန်..။
(သူများဇနီးမောင်နှံကို ရန်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ ဆံပင်ရှားပါးတဲ့ အနော့် မောင်ကလေးအတွက်ပါ ပိုရေးပေးလိုက်တယ် ခွိခွိ)
တကယ်ဆို မှတ်ချက်လေးတခုလောက်တော့ အရင်ရေးထားဖို့ ကောင်းတယ်။ (သတိ-အရယ်သန်သူများ ရုံး၌မဖတ်ရဆိုတာမျိုးပေါ့)။ အခုတော့ တခွိခွိနဲ့ computerကြီးကြည့်ပြီး မထိန်းနိုင်ရယ်နေတာကို ဘေးကကြည့်ပြီး ???တွေဖြစ်နေကြတယ်။ ကိုပေါရေ...(မပြောကောင်းပြောကောင်း) သရဲဖြစ်တောင် မှတ်မိနေမှာမို့ တို့ဆီလာခြောက်ရင် မကြောက်တဲ့အပြင် ရယ်မိမှာသေချာတယ်။ အရမ်းခက်တဲ့ comic ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရေးနိုင်တာ တကယ်တော်ပါတယ်။
့်ကြည့်ကာ..တလိမ့်လိမ့်တက်လာ ဒေါသ...အဲလေ...တသိမ့်သိမ့်အချစ်တွေလှူပ်ခတ်နိုးလာ."...ဆိုလား :D :D
ဒီရက်ပိုင်းတင်စရာမရှိပါဘူးဆိုမှ၊ ဓာတ်ပုံလေးတောင်အရိုက်မခံသွားဘူး.. နို့မို့ဆို (ကျွန်ုပ်နှင့်ချစ်စရာသရဲအကြောင်း) ဆိုပြီး အားရပါးရရေးလို့ရပြီ၊ ဟင်းဟင်းဟင်း။
ဩော်.. ကိုပေါ ဟာသဥာဏ်ကွန့်မြူးတတ်ပုံကိုယုံသွားပြီ၊ မဒမ်ပေါတော့ ညဖက်သတိထားအိပ်ပါ.. မတော်လို့ညကြီးသန်းခေါင် ထ ထ ရီနေရင်ဒုက္ခ..
ဟီးဟီး ရီရတယ် ဗြဲ
စကားပြေလေးကလဲ ကောင်းပါ့။ ဟာသဥာဏ်လေးကလဲ ရှိပါ့။ ပါးစပ်ကို မစေ့ရဘူး။
ဒါနဲ့ ကိုပေါက အမွှေးလဲ ပေါတယ်နော်။ ဟိ ဆံပင်မွှေးပြောပါတယ်။
အလို.....ကျွန်ုပ်အိပ်မက်မက်နေခြင်း မဟုတ်ပါကလား။ ၀တ္ထုထဲကဇာတ်ကောင်တွေက အပြင်မှာ တကယ်ရှိသကိုး။....
ပန်ဒိုရာ............၁၂ ကြိုးရတဲ့သူကို သရဲက သွားစမ်းမိတော့ သရဲဘဲ ခံရပေတော့မပေါ့။
တန်ခူး.............ကျေးဇူးပါ။ ရယ်ရတယ်ဆိုတော့လည်း ပျော်စရာပေါ့။
ကိုတီဇက်အေ........သရဲက ခြောက်ပေမပေါ့ဗျာ။ လူ့ဘ၀က ဟင်းခွက်တွေ ပြပြပြီး အနှိက်စက်ခံခဲ့ရတာကို အခဲမကြေဘဲကိုး။
ကိုကဒေါင်း......... ပိုက်ဆံလည်း ပေါပါတယ်ဗျ။ ဟဲ...ဟဲ........
ဓါတ်ပုံဆရာကို လိုက်ခြောက်တဲ့အကွက်ပဲ သဘောကျသဗျာ...။ ဘာမြင်မြင် ထူးခြားတာတွေ့ရင် ရိုက်မယ်ပဲ တစ်ကဲကဲ...။
ထိုင်းကနေ အပြန် မလေးကို မ၀င်သွားတာတော့ နာသဗျို့
အင်တာနက် ဒီနေ့မှ ပြန်ရလို့ ခုမှ ဒီပို့စ်ဝင်ဖတ်မိသကိုး။ ဒီနေ့တော့ အပိုင်း (၇) ကို ပို့အသစ်အဖြစ် တင်တော့မှာပါ။
ဟိ .. သရဲလာသွားတာ သတိမထားမိလောက်အောင် ကိုယ့် ဓါတ်ပုံလေးကလဲ လှမှလှပဲကိုး(ပန်းပွင့်တွေပြောပါတယ်)